कोरानोको प्रभाव अन्त्य नभईन्जेल घरभाडा मिनाहा गरिनुपर्ने, लामिछानेले दिए तीन महिनाको भाडा छुट
काठमाडौं । भाडावाला सरोकार समाज नेपालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सन्त्रासको प्रभाव नेपालमा समेत परिरहेकाले घरभेटीले आफ्नो आर्थिक क्षमता हेरेर तीन वा चार महिनासम्म घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
घर बहालमा बस्नेहरु अहिले ठूलो मर्कामा परेको समाजको निश्कर्ष छ । यो अवस्थालाई आत्मसात गर्दै सरकारले तत्कालै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने र मानवताका हिसाबले केही समय घरबहाल मिनाहा गर्नुपर्ने माग समाजले सरकारसमक्ष राखेको छ ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालले समेत सचेतना अपनाइरहेको बेला देशको सम्पूर्ण कामकारबाही ठप्प भैसकेको समेत समाजले ठहर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भाडामा बसोवास गर्नेहरु, भाडामा सटर तथा अन्य ठूलो व्यावसाय गरिरहेको व्यापारीहरुको व्यापार ठप्प भएको कारण घरभाडा तत्कालै सकेसम्म तीन महिना नसके केही छुट गर्न सरकार र घरधनीहरुलाई भाडावाला समाज नेपालको माग छ ।
कार्यक्रममा नेपाल खुद्रा व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष पवित्र बज्रार्चायले कोरोनाको प्रभावले आफूले चलाउँदै आएको रेस्टुरेन्ट बन्द गरिएको स्पष्ट पारिन । बिपत्ति कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने ? विषय अहिले पनि अन्यौलतामा नै रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा नआए मलाई लाखौँको नोक्सान हुनेछ । हामीलाई मर्का परेको छ, व्यापार नभए हामी कहाँबाट भाडा र लिएको ऋण तिर्ने ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।
कार्यक्रममा समाजसेवी हरिहर लामिछानेले कोरोनाको सन्त्रासमा मानवताका हिसाबले आफूले तीन महिना घर भाडा छुट दिने निर्णय गरिसकेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘केही प्रतिशत छुट गर्न मानवताका हिसाबले जरुरी छ ।’
काठमाडौंमा जागिर गर्ने र दैनिक ज्यालादारीमा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका व्यक्तिलाई अहिलेको कोरोना भाइरसको सन्त्रास स्थिर नभएसम्म घरभाडामा पूर्ण छुट दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘मैले यो विषयलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउन चाहेको छु । त्यसैले मैले यो अभियानलाई सार्थक तुल्याउनको लागि निर्णयसमेत गरिसकेको छु’–उनले भने ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा समाजसेवी किशोरजंग राणाले विभिन्न किसिमका व्यवसाय गर्दै र घरबहालमा बस्ने सम्पूर्ण नागरिकलाई जीवन धान्न गाह्रो भएको सुनाएका थिए । उनले भने, ‘मेरो १०० सैयाको अस्पताल छ, त्यसमध्ये ५० सैया जरुरी परे क्वारेन्टाइनको लागि दिन तयार छु ।’